कृष्णनगर, १७ असार । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं ८ मा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत लौहरौला स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको एक समारोहकाबीच प्रमुख अतिथि कृष्णनगर नगरपालिका नगरप्रमुख रजत प्रताप शाहले उद्घाटन गरेका थिए ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति संयोजक जाकिर हुसेनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं ८ वडाध्यक्ष नूर मोहम्मद खाको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा वडा सदस्य सुनिल चौधरी, कृषि ज्ञान केन्द्र बाली संरक्षण अधिकृत सत्यराम हरिजन, कृषि ज्ञान केन्द्रका रवीन्द्र नाथ चौबे, अतिथिमा कृष्णनगर नगरपालिका कृषि शाखा प्रतिनिधि र कृषि अफिसर प्रविना अचार्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि नगरप्रमुख शाहले स्मार्ट कृषि गाउँ नगरपालिकाभित्र रहनु आफैमा सराहनीय रहेको, उक्त गाउँमा कृषि आधुनिकीकरण अनुसार बालीको उब्जनी बढेको भन्दै नगरपालिकाबाट कृषि क्षेत्रको विकासमा हुन सक्ने हरेक सम्भव प्रयास गरिने बताए ।
कार्यक्रममा सिँचाई स्मार्ट कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट कार्यक्रम, हाइब्रिड जातको धान बिउ खरिद, खाद्य पोषण स्मार्ट कार्यक्रम, प्रविधि स्मार्ट, बजार स्मार्ट लगायतको विषय यस लोहरौला स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति अन्तर्गत राखिएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले आधुनिक प्रविधि, हाइब्रिड बिउ, उचित मलको प्रयोग लगायतले बालीनालीको उब्जनी बढेको बताएका थिए । कार्यक्रम संचालन कृषि ज्ञान केन्द्र तौलिहवाका योजना अधिकृत शिव पूजन गुप्ताले गरेका थिए । कार्यक्रमका अध्यक्ष जाकिर हुसेनले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
काठमाडौं : न्यूजिल्याण्डमा सवारी दुर्घटनामा परी एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । सुनसरी इनरूवा घर भई न्यूजिल्याण्डको साउथ आईल्याण्डस्थित एसबर्टनको एक डेरी फार्ममा कार्यरत सुवास घिमिरेको क्वाड बाइक दुर्घटनामा परी ज्यान गएको हो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ न्यूजिल्याण्डले घिमिरेको सम्पूर्ण परिवार नेपालमै भएकाले उनको पार्थिव शरीर नेपाल पठाउने सहयोग संकलन शुरू गरेको छ । पार्थिव शरीर नेपाल पठाउने प्रकृया निकै खर्चिलो भएको र घिमिरेको परिवारले सो प्रक्रियामा लाग्ने खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएकाले गैर आवासीय नेपाली संघ न्यूजिल्याण्डले सहयोग अभियान शुरू गरेको हो ।
एनआरएनए न्यूजिल्याण्डले नेपाली संघ संस्था, व्यक्तिसमक्ष सहयोगको अपिलसमेत गरेको छ । एनआरएन न्यूजिल्याण्डले संकलित रकमको विवरण सार्वजनिक गर्ने र सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने बताएको छ ।
काठमाडौंः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारको विरोधमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा मसाल जुलुससहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
गत असार १ गते सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको राप्रपाले जनाएको छ ।
बर्दियाः बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–३ मा भारतीय जङ्गलमा गोली लागि एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
विहान करिब १० बजे सीमावर्ती भारतीय जङ्गलमा निउरो टिप्न गएका हेमराज गोडियाको अज्ञात व्यक्तिले चलाएको गोली दायाँ खुट्टामा लागेको थियो ।
उनलाई अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य सुवेदीले जानकारी दिए।
गोली कसले कसरी चलाएको हालसम्म जानकारी नभएको उपरीक्षक सुवेदीले बताए। शव परीक्षण गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ ।
४० वर्ष कटेका एकल महिलाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता
काठमाडौं : ४० वर्ष उमेर व्यतीत गरी एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा त्यस्ता महिलाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको हो ।
त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर श्रीमानको सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि नरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरुलाई पनि एकल महिलाको परिभाषा भित्र राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिइन् ।
बैठकले नेपाल सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका साथै कुनै निश्चित क्षेत्र तोकी त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समेत त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ ।
समितिले न्यून आय भएका तथा पालनपोषण र हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भएर पनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका अन्य एकल महिलाहरुलाई पनि असहाय एकल महिला भत्ता दिने प्रावधान समेत पारित गरेको छ ।
त्यसैगरी सो घोषणागरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसैले लिन नचाहेमा उसलाई राज्यले प्रशंशा पत्रसहित सम्मान गर्ने प्रावधान समितिबाट पारित गरिएको समितिकी सचिव मिश्रले बताइन् ।
बैठकमा सांसदहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
गलकोट : बहुगुणी फलफूलको रुपमा रहेको ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती बागलुङमा शुरु भइसकेको छ । एक वर्षअघि मात्रै बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–१ पाला करिनाका प्रतिमान थापाले वैदेशिक रोजगारपछि गाउँको बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती थालेका थिए ।
त्यस लगतै गलकोटमा व्यावसायिक ड्रागन फ्रुट खेतीको शुरु भएको हो । यसैबीच बागलुङ बजार क्षेत्रमा पनि ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेतीको शुरु गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखाका विमलेश आचार्यले ठूलो क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती थालेका छन् ।
आचार्यले रामरेखा र माझी बस्ती गरी दुई स्थानमा ड्रागन फ्रुटखेतीको थालनी गरेका छन् । पछिल्लो समय निकै राम्रो मूल्य र बजार माग भएको फलफूल ड्रागन फ्रुटको विस्तारै बागलुङमा व्यावसायिक उत्पादन गर्नका लागि खेती थालिएको हो । आचार्यले विसं २०७८ चैतमा रामरेखास्थित आफ्नै दुई रोपनी जग्गामा ड्रागन फ्रुट खेती शुरु गरेका थिए । उनले ड्रागन फ्रुटका बिरुवा राम्ररी हुर्कन थालेपछि पुन रामरेखाकै माझीबस्ती नजिकै थप चार रोपनी जग्गामा ड्रागन फ्रुट खेती विस्तार गरेका छन् । हाल उनको दुई स्थानमा दुई हजार १०० ड्रागन फ्रुटका विरुवा रहेका छन् ।
ड्रागन फ्रुटको महत्व थाहा पाएपछि पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टलगायतले गरेको खेती हेरेर आफूले बागलुङमा यसको सम्भावना देखेर ड्रागन फ्रुटको खेती विस्तार गरेको रामरेखा निवासी विमलेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टलगायत सफल ड्रागन व्यवसायीको प्रेरणाबाट मैले ड्रागन फ्रुट खेती गर्ने निधो गरे, जसका लागि आफ्नै ६ रोपनी जग्गामा ड्रागन फ्रुटका बिरुवा लगाउने निधो गरे’, आचार्यले भने, ‘मैले दुई हजार १०० ड्रागन फ्रुटका विरुवा लगाएको छु, सबै बिरुवा मोरङबाट ल्याएको हुँ, यो ड्रागन फ्रुट सि भेराइटी मध्येको रातो जातको हो ।’
निर्माण व्यवसायी रहेका आचार्यले ड्रागन फ्रुट खेती विस्तारका लागि रु ५० लाख लगानी गरिसकेका छन् । उनले प्रति विरुवा रु ४०० मा खरिद गरेको बताए । ड्रागन फ्रुट खेतीका लागि सिमेन्टको पोल र टायर अनिवार्य हुन्छ । उनले ६०० सिमेन्टका पोल र टायरमा दुई हजार १०० विरुवा लगाएका छन् । उनले जग्गा व्यवस्थापन, तारबार, टायर, बिरुवा र पोललगायत लागि रु ५० लाखभन्दा बढी लगानी गरिसकेको भन्दै अझै लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आचार्यले १४ थरी फलबाट आउने पोषण तत्व ड्रागन फ्रुटबाट मात्रै पाइने भएकाले यसको बजारका लागि कुनै समस्या नदेखेपछि आफूले यसतर्फ लगानी बढाएको बताए ।
ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेतीमा शुरुमा धेरै लगानी गरेपनि पछि राम्रो कमाइ हुने गरेको छ । बागलुङमा व्यावसायिक ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक उत्पादन भने भइसकेको छैन । आचार्यले ड्रागन फ्रुट रोपेको एक वर्षदेखि १८ महिना भित्रै ड्रागन फ्रुट उत्पादन भइसक्ने उनको भनाइ छ । उनले ड्रागन फ्रुटको बोक्रा र काइनाको जुस प्रयोग गर्न सकिने बताए । ‘रातो ड्रागन फ्रुटको मूल्य अहिले पनि बजारमा ८०० देखि एक हजारप्रति केजी छ, नेपालमा यसको उत्पादन बढ्दै गएपछि मूल्य केही घट्ला तर यसको बहुउपयोगिताका कारण बजारको माग धान्नै समस्या हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘१४ भन्दा बढी फलफूलमा फाइने पोषण तत्व ड्रागन फ्रुटमा पाइने अध्ययनले देखाएको छ, अबको एक वर्षमा आफ्नो ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक उत्पादन भइसक्नेछ ।’
आचार्यले ड्रागन फ्रुटका लागि पोल र सुरक्षाका लागि गरिने तारबारका कारण सुरुवाती लगानी नै धेरै भएको अनुभव सुनाए । दक्षिण पूर्वी एशियाका देश भियतनाम फिलिपिन्स थाइल्याड लगायतको देश हुँदै अहिले यो फल नेपालमा भित्रिएको छ ।
ड्रागन फल गर्मी र सुख्खा हावापानीमा हुने सिउडी प्रजातिको फलफूल हो । यस फलको जातमा रातो बोक्रा, पहेँलो बोक्रा र सेतो रङ हुने गरेको छ । यस फलमा १२ प्रकारका मिनिरल्स तथा भिटामिन पाइन्छ । यो फलमा क्यान्सर प्रतिरोधात्मक गुण रहेको छ । जस्तोसुकै माटोमा खेती गर्न सकिने यस फललार्ई गमला, छत तथा करेशामा पनि लगाउन सकिन्छ ।
यो फलमा औषधिय गुणसमेत भएकाले यसको माग बजारमा उच्च रहेको छ । यसले कब्जियतलाई निको पार्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो फलबाट उच्चस्तरको आइसक्रिम, इनर्जी ड्रिंक, वाइन र ब्रान्डी बनाउनसमेत सकिन्छ । रासस
काठमाडौं÷मस– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहराइनका लागि नेपाली राजदूतमा तीर्थराज वाग्लेलाई नियुक्त गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वाग्लेलाई बहराइनका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत प्रा. श्रीधर खत्रीलाई मेक्सिकोका लागि समेत गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गरेकी छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा खत्रीलाई मेक्सिकोका लागि गैरआवासीय राजदूत नियक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
देलेखमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम
दैलेख, १७ असार । दैलेखमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी शुरु भएको छ । भगवतीमाई गाँउपालिकाको आयोजनामा, प्रदेश सुशासन केन्द्र सहयोगमा कार्यक्रम भगवतीमाईमा शुक्रबारबाट शुरु भएको हो ।
शनिबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा गाँउपालिकाका अध्यक्ष, उपाअध्यक्ष, वडाध्यक्ष ,कर्मचारी, सहभागी छन् । स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी अभिमूखिकरण गर्ने र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रदेश सुशासन केन्द्रका जनक भट्टराईले जानकारी दिए ।
यस्तै भगवतीमाई गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखत बहादुर थापाले नीति, कानून योजना संस्थागत व्यवस्थापन मानव संसाधन तथा क्षमता विकास सेवा प्रभाव सुशासन तथा उत्तरदायित्व थप कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई जोड दिए । तालिमले गाँउपालिकाभित्र बालबालिका तथा महिला हिंसाका घटनाको जोखिम न्यूनिकरण र पूर्व तयारीमा टेवा पुग्ने भएकाले बताउँदै उनले तालिममा सिकेका सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा कार्यान्यवन गरे मात्र तालिमले सार्थकता पाउने बताए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बहादुर थापाले स्थानीय तहमा मात्र नभई लैङ्गकि समानता हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताए । समुदायमा महिला हिंसा, अपाङ्गता बालशोषण र सामाजिक दुर व्यबहार अन्त्यको लागी हामी सवै जुटेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौंका थप तीन जनामा हैजा
काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकामा आज थप तीन जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनका अनुसार यो सङ्ख्यासँगै अहिलेसम्म उपत्यकामा १७ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले तीमध्ये १२ पुरुष र पाँच महिला छन् भने पाँच जनाको उपचार भइरहेको छ ।
प्रधानसेनापति शर्माद्वारा अमेरिकी उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग भेटवार्ता
काठमाडौंः अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले त्यहाँका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा उनले अमेरिकाका जोइन्ट चिफ स्टाफ एडमाइरल क्रिस्टोफर डब्लु ग्रेडी, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक सचिव लिन्से डब्लु फर्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
यस्तै अमेरिकी सेनाका आर्मी चिफ अफ स्टाफका जनरल जेम्स चार्लेससँग पनि शर्माले भेट गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
उक्त भेटघाटका क्रममा नेपाल र अमेरिकाबीचको सैनिक सम्बन्ध तथा दुई राष्ट्रबीच रही आएको पारस्परिक सम्बन्ध एवं हितका विषयहरुमा छलफल तथा विचार विमर्श भएको थियो ।
सेनाकाअनुसार असार १७ शर्मा र भ्रमणदलका सदस्यहरुले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण गरी त्यहाँका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा असार १३ देखि अमेरिकाको भ्रमणमा छन् ।